Thursday June 13, 2019 - 18:07:00 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xaalad feejignaan ah ayaa looga dhawaaqay mandiqadda loo yaqaan bariga dhexe saacado kadib markii weeraro khasaara maaliyadeed dhaliyay lagu qaaday laba kamid ah maraakiibta ganacsiga ee shidaalka ka daabulo dowladaha khaliijka.
Wararka ka imaanaya biyaha kala qeybiya imaaraatka Carabta iyo Iiraan ayaa sheegaya in gubasho daran ay gaartay markab lagu magacaabo Coccoca Carides oo uraran dalka Japan balse uu ka babanayo calanka dalka Banama.
Afhayeen u hadlay Dowladda Norway ayaa beeniyay warar uu baahiyay telefeshinka xukuumadda shiicada iiraan oo ahaa in uu quusay mid kamida maraakiibta laweeraray oo u raranaa shirkad laga leeyahay Norway.
Sawirro lagasoo qaaday gacanta Cummaan oo ah goobta ay ku gubteen maraakiibta laweeraray ayaa muujinayay uura madoow oo cirka isku shareertay goobta, dowladda Iiraan ayaa xaqiijisay in lasoo badbaadiyay dhammaan shaqaalihii la socday maraakiibta shidaalka sida ee gubtay.
Markabka kale ee gubtay oo lagu magacaabo Front Alter waxaa leh shirkad ganacsi oo ka diinwaan gashan wadanka Norway waxaana la sheegay in waxyeella xooggan ay gaartay, goobta weerarku ka dhacay ayaa qiyaastii 70 Meyl ujirta biyaha kala qeybiya iiraan iyo Imaaraatka Carabta halka 16 Meyl oo kaliya ay ujirto dowladda iiraan.
Dekado kuyaal wadamada Cummaan iyo Pakistan oo aan sidaas uga fogeyn goobta maraakiibta lagu weeraray ayaa sheegay in ay lakulmeen qeylla dhaam gurmad weydiisasho ah daqiiqado kadib markii ay qaraxyadu dhaceen.
taliska ciidamada dowladda Mareykanka ee mandiqadda loo bixiyay Bariga dhexe ayaa isna xaqiijiyay in xilligii weerarku dhacayay mid kamida maraakiibtiisa gujisyada uu ku sugnaa gacanka Cummaan islamarkaana uu dooma dheereeya udiray maraakiibta weerarka lakulmay.
Dowladda shiicada iiraan oo larumeysanyahay in ay mas'uul ka tahay weerarkan ayaa ku dhawaaqday in ay badbaadisay 44 kamid ah shaqaalaha maraakiibta laweeraray ayna geysay goob ammaan ah, illaa iyo hadda si rasmi ah looma sheegin cidda mas'uulka ka ah weerarkan oo saameyn xun ku reebi doona ganacsiga caalamka gaar ahaan shidaalka laga daabulo dowladaha khaliijka loona dhoofiyo caalamka intiisa kale.
Al Shabaab oo Weerar Askar lagu dilay ku qaadday saldhigga deegaanka Af Urur.